Lof Yu's "Kuziere m igwe igwe", akwụkwọ udu mmiri nke udu mmiri, ana ere ire | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
"Kuziere m igwe igwe", nke Lof Yu dere, akwukwo akwukwo ndi ntorobia na-aga ere
Eva Maria Rodriguez | | Akwụkwọ, Akwụkwọ ndị ntorobịa
Taa ọ na-aga n'ihu ire ere na Oge ntorobịa akwụkwọ ọgụgụ Gosi m igwe, na Lof yu, akụkọ dị ezigbo mkpa maka ndị na-agụ akwụkwọ na-eto eto, nke ọhụrụ, nke dị ugbu a na nke ihunanya na, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ha ga-ahụ ya n'anya. Gosi m igwe bu ihe edere n’akwukwo nke ubochi nile nke n’eme ka ndi n’enye akwukwo mata nke oma, dika ihunanya oge okpomoku, ndakpọ olileanya, ihunanya ohuru, na ihe ndi ahu gbasara umu agbogho ndi n’enwe obi ojoo n’oge ahu ma cheta ya nke oma (ma obu na obughi)
Yabụ, ị bụ onye nọ n'afọ iri na ụma chọrọ ịmatakwu banyere ndụ yana ịmasị ịgụ, lee echiche na-atọ ụtọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iju otu onye n’afọ iri na ụma anya site n’ịgụ ihe na-atọ ụtọ, lee ezigbo onyinye ị chọpụtara ugbu a.
Synopsis «Gosi m igwe»
Ezinụlọ Sole ekpebiela ịnọ n'oge ọkọchị n'ụlọ ụlọ ochie ha. Ọ dị njikere ịga hapụ Oscar, enyi ya nwoke. Ma, ihe agaghị adị ka ọ tụrụ anya ya, a ga-amanye ya ịnọ ezumike na obodo ya na-agwụ ike. Ihe niile ga - agbanwe maka Sole mgbe o zutere Á Álex. Sole ga - enwe ike ịtachi obi n'oge okpomọkụ niile na-enweghị Oscar?
Ndi akpama ndifiọk nte mbụk emi ọkọtọn̄ọde? I nwere ike ịgụ isi nke mbụ nke Gosi m igwe ebe a
Banyere Lof Yu
N'azụ pseudonym nke Lof Yu, Adrià Font na Imma Sust hide
A mụrụ Adrià Font n'afọ asatọ. Ọ hụrụ ihe nkiri na uri n'anya. Ọchịchọ ya edugawo ya n'ịmụ ihe ọmụma na Audiovisual Communication. Odeela ọtụtụ egwuregwu na ọtụtụ akụkọ iji were ọkụ kọọ. Ọ na-arụ ọrụ ugbu a dị ka onye na-eme ihe nkiri na usoro Nnupụisi ahụ na ọwa 3xl. Ọ bụkwa onye poetoño na onye na-ede uri ịhụnanya na mmemme RNE Afectos Matinales. Adrià Font bu nwatakiri nwoke na-agbanwe agbanwe, n'otu aka ahu o na-akwa akwa ma obu nke adọwara adọwa mgbe ọ na-akọrọ gị akụkọ, na-akpọ ụbọ akwara, clarinet ma ọ bụ trombone wee mee ka ị bụrụ ofe Galician.
A mụrụ Imma Sust na 1974. O gosipụtala ma duzie ọtụtụ mmemme telivishọn (TV3, Btv, Cuatro, Telecinco na La Sexta). O sonyela dika ihe ngosi na mmemme redio (RAC1, COM redio, Onda Cero, Catalunya Radio) na mmemme dịka Ebo ahụ nke Javier Sardà nwere mgbe anyị nwere ozi ahụ. O dekwara ogidi echiche maka Diario Metro na Avui. Ugbu a ọ na - ejikọ ọrụ ya dị ka onye na - eme ihe nkiri nọọrọ onwe ya na ntinye ngosi ya bụ GINTONIC na Barcelona. Onye nta akụkọ, onye ngosi, okwu ngosi, onye nduzi, onye editọ ... Imma Sust bụ ezigbo nwanyị ndị otu nwanyị nwere ike ime ihe ọ bụla etinye ya n'ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » "Kuziere m igwe igwe", nke Lof Yu dere, akwukwo akwukwo ndi ntorobia na-aga ere
"Akwụkwọ a bụ nke ị dere", ihe ịma aka ide ihe 78